Proverbe 85 Akanga Ankova maneno lohataona ; ka ny tenako be no atý, fa ny saiko any Ankaratra ihany. [Houlder 1895]
Proverbe 86 Akanga be tany, tsy manam- paria . [Samson 1965 #A14]
Proverbe 88 Akanga diso ala ka mahatsiahy ny tany nahazatra . [Rinara 1974]
Proverbe 89 Akanga diso an’ Andringitra : ny tenabe no aty, fa ny fo mametsovetso any ihany. [Nicol 1935 #46, Cousins 1871]
Proverbe 91 Akanga lahy miady tsatsangotra : sola loha foaña. [Houlder 1895]
Proverbe 92 Akangalahy miditra ala : miandry ny oran-kisava , vao tratry ny ora-mikija . [Rinara 1974]
Akangalahy miditra ny ala : miandry ny oran-kisava , ka tratry ny ora-mikija . [Veyrières 1913 #4263, Cousins 1871 #34]
Proverbe 93 Akanga lahy tsy manohon’ anaka. [Samson 1965 #A15]
Proverbe 94 Akanga mahalala "tsaratsarao ", mainka ny olona samy olona . [Veyrières 1913 #3429]
Ny akanga aza mahalala ny tsaratsarao , ka mainka fa izaho olombelona. [Houlder 1895 #1591]
Ny akanga aza mahalala ny tsaratsarao , ka mainka fa olombelona . [Rinara 1974 #2838]
Proverbe 95 Akanga makangoa : ho hanina mahafaty ray, tsy ho hanina mahafaty reny. [Samson 1965 #A16]
Proverbe 96 Akanga mandry anambo : ny vatam-be anambo fa ny menimeny ambony tany. [Samson 1965 #A17]
Proverbe 97 Akanga nanamborana , ka mivadi-po mandrakariva. [Cousins 1871 #32, Nicol 1935 #355]
Proverbe 1990 Fandrik' akanga mahavoa manditra, ka ny vandana tsy izy no aseho . [Veyrières 1913]
Fandrik' akanga mahavoa manditra, ka ny vandana tsy izy no voa . [Veyrières 1913]
Fandrik' akanga nahavoa manditra: ny vandan-tsy izy no voa . [Houlder 1895 #957, Cousins 1871 #920]
Proverbe 2546 Imerina akanga tsy roa volo , fa iray ihany. [Veyrières 1913 #287, Cousins 1871, Houlder 1895]
Proverbe 4685 Na dia eo aza ny akanga tsara soratra , ny afindrafindrao tsy azo avela . [Akademia 2005]
Proverbe 4983 Ny atodi akanga , ny taola-mizana , tsy azo vakiany . [Rinara 1974 #2908]
Proverbe 7053 Ty mahalava moko ty akanga io ty fitaoñe . [Poirot & Santio: Vezo]
Proverbe 7403 Tsararaka manenon' ny akanga eny ambonin' ny ala miandrandra; tsiatsiaka manenon' ny vorona eny anatin' ny ala maizina . [Veyrières 1913 #5148]
Proverbe 7577 Tsy mba akanga hanidina aho, fa ny ganagana raisina amin' ny tendany . [Rinara 1974 #4546]
Tsy mba ny akanga hanidina aho, fa ny vorombazaha entina amin' ny tendany . [Houlder 1895 #376]
Proverbe 8376 Za-dratsin’ ny mitovo : mandany vatan’ akanga raika. [Samson 1965 #Z1]